Nhau - Iyi mhepo iri pasi pe radar ichawedzera huwandu hweUPS
Iyi mhepo iri pasi pe radar ichawedzera huwandu hweUPS
Iyo Motley Benzi yakavambwa mu1993 nehama Tom naDavid Gardner. Kuburikidza newebhusaiti yedu, podcast, mabhuku, mapepanhau, zvirongwa zveredhiyo uye epamberi mabasa ekudyara, isu tinobatsira mamirioni avanhu kuwana rusununguko rwemari.
United Parcel Service (NYSE: UPS) yaive neimwe kota yakasarudzika, nemari yayo yepasi rose ichirova rekodhi, iine madhijitari maviri emari uye kukura kwemihoro. Nekudaro, nekuda kwekunetseka pamusoro pokuderera kwemubhadharo weUS uye zvinotarisirwa zvemabhadharo epasi mumakota echina, masheya achiri kudonha 8.8% neChitatu.
Kufona kwemari yeUPS izere nemhedzisiro inoshamisa uye fungidziro yekukura kwemari mune ramangwana Ngatitarisei zvirimo kuseri kwenhamba idzi kuti tione kana Wall Street yatengesa UPS mukukanganisa uye chii chichafambisa mutengo wemari kumusoro mune ramangwana.
Zvakafanana nekota yechipiri, e-commerce uye diki nepakati bhizinesi (SMB) yekugara kudiwa kwakawedzera, zvichikonzera UPS rekodhi mari. Zvichienzaniswa nekota yechitatu ya2019, mari yakawedzera ne15,9%, yakagadziriswa purofiti yekushanda yakawedzera ne9.9%, uye yakagadziriswa mibairo pachikamu chakawedzera ne10.1%. UPS kupera kwevhiki ivhu rekufambisa ivhu rakawedzera ne161%.
Pakati penzara iyi, misoro yenhau dzeUPS yaive yekuwedzera munzvimbo dzavaigara sezvo vanhu vaidzivirira kutenga mukati mevanhu uye vakatendeukira kune vatengesi vepamhepo. UPS ikozvino inofungidzira kuti e-commerce kutengesa ichaverengera anopfuura makumi maviri muzana ezviuru zvekutengesa zvekuUS gore rino. Mukuru weUPS, Carol Tome akati: “Kunyangwe paita denda iri, hatifunge kuti mwero wekupinda mukutengesa e-commerce uchaderera, asi kwete zvekutengesa chete. Makasitoma munzvimbo dzese dzebhizimusi redu vari kuumba maitiro avanoita bhizinesi. ” . Maonero aTome ekuti e-commerce mafambiro achaenderera iri nhau hombe kukambani. Izvi zvinoratidza kuti manejimendi anotenda kuti zvimwe zviito zvechirwere hazvisi zvipingamupinyi zvenguva pfupi kubhizinesi.
Imwe yeakanyanya kuchenjera kuwana muUPS chetatu-kota mibairo yaive kuwedzera kwenhamba yeSMB. Pamugwagwa uchikurumidza wekambani, kutengesa kweSMB kwakawedzera ne25.7%, izvo zvakabatsira kudzikisa kuderera kwekutengeswa kwevatengesi nemakambani makuru. Pakazara, SMB vhoriyamu yakawedzera ne18,7%, yakanyanya kukura mwero mumakore gumi nematanhatu.
Management inoratidzira chikamu chakakura chekukura kweSMB kune yayo Dhijitari Yekuwana Chirongwa (DAP). DAP inobvumidza makambani madiki kugadzira maPS account uye vagovane akawanda mabhenefiti anofarirwa nevatakuri vakuru. UPS yakawedzera zana nemakumi mashanu ezviuru nhoroondo dzeDAP mukota yechitatu uye nemakumi maviri ezviuru maakaundi mukota yechipiri.
Parizvino, panguva yedenda, UPS yakaratidza kuti kutengesa kwepamusoro pekugara nekutora chikamu kwemabhizimusi madiki nepakati kunogona kugadzirisa kudzikira kwehuwandu hwekutengesa.
Chimwe chakavanzika chakavanzika chekambani yekuwana musangano kufona ndiko kumisikidzwa kwebhizinesi rezvehutano. Iwo ehutano uye emagetsi maindasitiri aive iwo ega bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) zvikamu zvemusika mukota ino-kunyangwe kukura kwacho kwanga kusingakwanise kudzikisira kuderera kwemaindasitiri chikamu.
Iyo yekufambisa hofori yakavandudza zvishoma nezvishoma yayo yakakosha yekurapa sevhisi sevhisi UPS Premier. Iyo yakafara zvigadzirwa mitsara yePSPS Mutungamiriri uye UPS Hutano hutano inovhara ese maketeni zvikamu zveUPS.
Kuvimba nezvinodiwa zveindasitiri yehutano isarudzo yechisikirwo yeUPS, nekuti UPS yakawedzera pasi uye nemhepo masevhisi kuti agone yepamusoro-vhoriyamu yekugara uye SMB kuendesa. Iyo kambani zvakare yakajekesa kuti yakagadzirira kubata zvinhu zvine chekuita nezve COVID-19 yekuparadzira jekiseni. CEO Tome akataura zvinotevera paUPS Healthcare nedenda:
[Chikwata chekurapa chiri kutsigira kuyedzwa kwekiriniki yejekiseni reCOVID-19 pamatanho ese. Kutora chikamu kwekutanga kwakatipa dhata rakakosha uye ruzivo rwekugadzira zvirongwa zvekuparadzira nekutengesa nekugadzirisa zvigadzirwa zvezvinhu izvi zvakaoma. Pakabuda jekiseni re COVID-19, takave nemukana wakanaka uye, kutaura chokwadi, takava nebasa rakakura rekushandira nyika. Panguva iyoyo, yedu yepasirese network, inotonhora cheni mhinduro uye vashandi vedu vanenge vakagadzirira.
Sezvakaita nemamwe maronda ane chekuita nedenda, zviri nyore kutaura kuti budiriro yeUPS ichangoburwa kuzvinhu zvenguva pfupi zvinogona kupera zvishoma nezvishoma sezvo denda rinopera. Nekudaro, manejimendi eUPS anotenda kuti kuwedzera network yayo yekufambisa kunogona kuunza mabhenefiti enguva refu, kunyanya kuwedzera kwekuenderera kwe e-commerce, kubatanidzwa kweSMB munzvimbo yayo yevatengi uye bhizinesi rezvekurapa rinochengetedza nguva, izvo zvicharamba zvichisangana nezvinodiwa zve iyo indasitiri yezvokurapa mumakore mashoma anotevera.
Panguva imwecheteyo, zvakafanira kudzokorora kuti mhedzisiro yeUPS's-quarter-quarter yaive inonakidza apo mamwe akawanda maindasitiri aive mumatambudziko. UPS munguva pfupi yapfuura yakawedzera kune itsva 52-vhiki yakakwira, asi kubvira yadonha pamwe nemamwe misika. Tichifunga nezvekutengeswa kwemasheya, kugona kwenguva refu uye goho remugovano we2.6%, UPS ikozvino inoita kunge yakanaka sarudzo.
Post nguva: Nov-07-2020